ထွေရာလေးပါး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ထွေရာလေးပါး
Posted by same kyaw on Jul 19, 2012 in Community & Society | 21 comments
ထွေ ရာ လေး ပါး
ဒီနှစ် ဆို အာဇာနည်နေ့ က၆၅နှစ်မြောက် ပေါ့။ဒီနှစ်တော့ ဒုသမ္မတ ကိုယ်တိုင်အာဇာနည်နေ့ကို တက်ရောက် အလေးပြုတာတွေ့တယ်။ ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှု့ဘဲ
ဒီလ ၂၆ရက်ဆို အမေရိကန်တို့မြန်မာကိုပိတ်ဆို့မှု့ Burmese freedom and democracy act of 2003 က၉နှစ် ပြည့်သွားဘီး။
ဒါကို အမေရိကန်လွတ်တော်က နောက်ထပ် ၃နှစ် ၂၀၁၅ထိ တိုးဘို့ လွတ်တော်ကို အဆို ၂ခါ
ခုလဲ အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့မှု့ရုတ်သိမ်းတာ သူတို့နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတွေ ကို မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီမြုပ်နှံဘို့ သူတို့နိုင်ငံအကျိုးအတွက်ဘဲ။မြန်မာပြည်က ကုန်ဝယ်ဘို့ ငွေကြေးမပါ။ ဒါဆို ဘာထူးမှာလဲ ။ဒီကိစ္စကို ခုလွတ်တော်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပထမဆုံးအကြိမ် နောက်ထပ်ပိတ်ဆို့မှုထပ်မတိုးဘို့ တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။
ဒါသတင်းကောင်းဘဲ။ဒီလိုဘဲဖြစ်သင့်တယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စက်တင်ဘာလ အမေရိကန်ကို သွားဘို့ရှိတယ်။
တရုတ်ပြည်ကို မြန်မာပြည်က အမဲသားတွေ တင်သွင်းခြင်းကို တရားဝင်ပိတ်လိုက်ပြီ။ပိတ်မှာပေါ့ ကချင်ပြည်ဘက်မှာ နွားတွေ ကို တရားမ၀င် တရုတ်ပြည်ကိုခိုးပို့နေကြတယ်။
တကယ်တော့လဲ မြန်မာ ပြည်က အဖိုးတန် ထွက်ကုန်သီးနှံ သဘာသအရင်းအမြစ်၊ ကျွန်းသစ်နဲ့ သစ်မျိုစုံ သာရဲတိရစ္ဆာန်လဲ တွေ ကို တရုတ်ပြည်ကို တရားမ၀င်ပို့ဆောင်တဲ့အတွက်တရုတ်က ဈေးပေါချောင်ကောင်း အခွန်လွတ် ရနေတယ်။
ဟိုတလောက ပြည်သူလူထု စားသုံးဆီ၇န်မသင့်တဲ့ ဆီတွေ တင်သွင်းတယ်တဲ့ ဌါနဆိုင်ရာ ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မှ မလုပ်တာ
မနေ့က ကောလင်းက ပညာရေးမှုးက တရုတ် ပြည်က ၀င်တဲ့ သာရေစာတွေ ကျောင်းမှာ မရောင်းဘို့ပိတ်လိုက်သတဲ့ —-ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တရုတ်က လာတဲ့ သာရေစာတွေ စားပြီး ကျောင်းသားတွေ ဗိုက်နာလာလို့တဲ့ ။။တကယ်တော့ သတိမထားမိကြတာပါ ဟိုလော ကတောင် ကလေးတွေ တရုတ်မုန့်တွေစားကြပြီး အကြီးအကျယ်ဗိုက်အောက့်လို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်လေ
မနေ့ ကနွားထိုးကြီးမှာ မြေတွေ ကွဲအက် တောင်တွေ ပြိုလို့တဲ့။သိကြတဲ့အတိုင်းဘဲ လေ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းက မြေကြောတွေ ကဆက်နေကြတာလေ ။နေရာအနှံမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီ တွေ က မြေတွေ ကို မိုင်းခွဲပြီး မြေအောက် mineral products ရှာကြတာလေ
အာဆီယမ် မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သမ္မတကြီးကို ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကို မေးသတဲ့ ဒါမေးစရာလား အာဆီယမ်ရဲ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တယ်။အာဆီယမ်မှာ ပြည်တွင်းရေး ၀င်မစွက်ရဘူးပြောထားတယ် ။
ဒါကြောင့်သမ္မတကြီး ကပြောတယ် အားနာလို့ သဘောကောင်းတာ ကို ဖိအားပေးကြတယ်တဲ့။ဟုတ်တာပေါ့ အားနာလို့မပြောတာ ယောင့်တက်တယ်။
ထိုင်း၂၀၀၄ခုနှစ်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်သွားသလဲ။မသိယောင်ဆောင်နေတယ်။မပြောရဲကြလို့လေ။ထိုင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို ရက်ရက်စက်စက်ကိုင်တွယ်တယ်။ဘယ်နိုင်ငံ ကပြောလဲ။
ခုလဲကြည့်လေ ရခိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စဘဲ ကြည့် ကိုယ့်မြေမှာနေပြီး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေကို တက်စော်ကားတာ ရခိုင်စစ်တပ် ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိုဘာမှ မလုပ်ဘူး ။အလှကြည့်နေတယ်။
ဒါတောင်စစ်တပ်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိုသတ်နေပါဘီဆိုပြီး ခုထိ ဓာတ်ပုံလိမ်တွေနဲ့ လိမ်တုံး။
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး တကောင်တည်းသော လိပ်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့ အသက် ၁၀၀၊ပေါင် ၂၀၀တဲ့ အီကွေဒေါရှိ Galapagos ကျွန်းမှာ ရှိတဲ လိပ်နံမည် က Georgeတဲ့
လိုတာရှိ ၇င် ကိုသာဂိပါဘဲ
ကျေးဇူးပါ ကျန်ခဲ့လို့ ပြောရအုံးမယ် နှစ် ၂၀ကျော်ပိတ်ထားတဲ့ ရုရှ ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ YIU ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့ အရင်အတိုင်းဘဲ ပြန်သင်ပေးတော့မယ်တဲ့။
အော် သက်တမ်းရှည်ဆုံးလိပ် ကမိုက်တယ်နော်
ဖတ်သွားတယ်ဗျို့။ နောက်လဲဆက်ပြီးရေးပါအုန်းဗျာ။ မသိတဲ့အချက်လေးတွေသိရတာပေါ့။
ရေးနေရင်း. နောက်ဆုံးမှာ လိပ်ကြီး အသုဘနဲ့ ဆုံးသွားပါလားဗျာ။
ကိုဘုန်းကျော်နဲ့ နာမည်တင် တလုံးတူတာမဟုတ်ဘူး ….. အရေးသားပါ တူတယ်ဗျို့ … ။
သူများတွေ သတိမထားမိတဲ့ အချက်လေးတွေကိုထောက်ပြပြီး ပို့စ်ရေးသွားတာလည်း အလွန်ကောင်းဗျို့ … ။
ဒါနဲ့ အဲ့လိပ်ကြီးက အသက်တစ်ရာတောင်နေရသတဲ့လား … လူတွေထက် သက်တမ်းပိုရှည်တယ် … ။
အသက်တစ်ရာဆိုတာ မွေးတုန်းကသိခဲ့သူရှိလို့လား .. ပညာရှင်တွေ ခန့်မှန်းတာလားဆိုတာတော့ သိချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ် … ။
ဒီလိုပါ အဲ့ဒီလိပ် ၁၉၇၂ မှာတွေ့ပြီး အီကွေဒေါ တိရစ္ဆာန် ဥယာဉ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေ ထားထားတာ ။အဲ့ဒီကတည်းက လိပ်ကို တခြားလိပ်မတွေနဲ့ မျိုးစပ်ပေး တာမရဘူး။ပညာရှင်တွေ ခန့်မန်းတဲ့အသက်ပါ။
အော … ဒီလိုကိုး .. ပြန်ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးပါ … ။
ဒါနဲ့ … ဒီလိပ်က .. မိန်းမစပ်ပေးတာ မရလို့များ … အသက်ရှည်တာလား … ။
မိန်းမများရလျှင် ဒီထက်အသက်ပိုရှည်မလား မသိဘူးနော် ………. တွေးရင်းတွေးရင် တဆုံးရောက်သွားတယ် ….
ထွေရာလေးပါးသာ ဆိုတယ်.. ပြောသွားတာ သတင်းကို စုံနေတာပဲ… သတင်းစုံလင်မှာ… ရွာထဲတွင် ရွာသူရွာသားများ ရောက်ရှိနေပါကြောင်းလေးပါ ထည့်ပြောသွားတာမဟုတ်ဘူး။
“ခုလဲ အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့မှု့ရုတ်သိမ်းတာ သူတို့နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတွေ ကို မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီမြုပ်နှံဘို့ သူတို့နိုင်ငံအကျိုးအတွက်ဘဲ။မြန်မာပြည်က ကုန်ဝယ်ဘို့ ငွေကြေးမပါ။ ဒါဆို ဘာထူးမှာလဲ ။”
– ဘာထူးမလဲသိချင်၇င် အဲ့ဒီ၇င်းနှီးမြုပ်နှံ့မှူကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ ခန့်မယ့် လျာထားတဲ့ ၀န်ထမ်း ၅ သိန်းကျော်ကိုမေးကြည့်။ ပြီး၇င် သူတို့ပေးတဲ့လစာနဲ့ မြန်မာ၇ုံးတွေ ပေးတဲ့လစာယှဉ်ကြည့်။ မြန်မာပြည်က ဘောစိ ဘယ်နှစ်ကောင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအလုပ်ပေးနိင်လဲတွက်ကြည့်……..
” တရုတ်ပြည်ကို မြန်မာပြည်က အမဲသားတွေ တင်သွင်းခြင်းကို တရားဝင်ပိတ်လိုက်ပြီ။
ပိတ်မှာပေါ့ ကချင်ပြည်ဘက်မှာ နွားတွေ ကို တရားမ၀င် တရုတ်ပြည်ကိုခိုးပို့နေကြတယ် ”
မြန်မာပြည်က အမဲသားတွေမှာ ရောဂါပိုးတွေ တွေ့ရတဲ့အတွက် ၊
တရုတ် အစိုးရက မြန်မာပြည်က အမဲသားတွေကို လက်မခံတော့တာပါ ။
လောလောဆယ် ၊ မြန်မာပြည်ထဲက အမဲသားထုတ်တဲ့ စက်ရုံ ၃ ရုံရပ်လိုက်ရပါပြီ ။
မြန်မာ လူမျိုး တစ်ချို့ အလုပ် လက်မဲ့ ဖြစ်သွားပါပြီ ။
” မြန်မာ ပြည်က အဖိုးတန် ထွက်ကုန်သီးနှံ သဘာဝအရင်းအမြစ်၊
ကျွန်းသစ်နဲ့ သစ်မျိုစုံ သာရဲတိရစ္ဆာန်လဲ တွေ ကို တရုတ်ပြည်ကို
တရားမ၀င်ပို့ဆောင်တဲ့အတွက်တရုတ်က ဈေးပေါချောင်ကောင်း အခွန်လွတ် ရနေတယ် ”
” အခွန်လွတ် ” မရပါဘူး ။
တရုတ် အစိုးရကို သေချာပေါက် အခွန်ဆောင်ရပါတယ် ။
တ၇ုတ်ကီးတွေလား အခွန်မ၇ပဲ import ပေးလုပ်မှာ တခြားနိင်ငံဆိုယုံသေး
Chinese ……………ကိုအခွန်လွတ်ဆိုတာတော့ နိုးနိုးနိုးပဲ။
ကျုပ်၇ဲ ဖြူးက ဘကြီးတောင် “လူငယ့်အားမာန်သစ်စက်’ ကနေတ၇ုတ်ကို သစ်တွေသွင်းတာ
ဘယ်နှယ့်အိုဗျာ………….တ၇ုတ်ကိုသာ အခွန်မပေးကတိုင်း Import လုပ်နိင်မှာတော့
ကျုပ် အဘတေဇလည်း top one မီလျှံနဲး ဖြစ်နေပြီ။Give and Take ပေါ့ဗျာ ပာုတ်ဘူးလား
တရုတ်ကပြောတယ် မြန်မာပြည်က အမဲသားထဲမှာ နားရွက်ပြာရောဂါပိုးတွေ ပါနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါ။ခိုးသွင်းတာဆိုတော့လည်း မြန်မာပြည် ဘက်ကတော့ ပေါချောင်ကောင်းရတာတော့အမှန်ဘဲ။ရောဂါရှိတယ်ထင်ရင်မြန်မာပြည်က နွားလဲမသွင်းနဲ့လေ။အသိတယောက်(ခု ၃၉ အလယ်လမ်းမှာနေတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားအစစ် မြန်မာပြည်မှာခိုးပိုက်ဆံပေးပြီ မြန်မာပြည်သားဖြစ်နေဘီး )သူတို့အမျိုးတရုတ်အားလုံးတောင်ကြီးမှာ နန်းဆိုပြီး ၇ှမ်းလုပ်ထားတယ် ။တောင်ကြီးဈေးထဲမှာ အထည်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ် သူတို့တွေ နဲနဲနှောနှော ကျောက်တွေ မဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြည်ကို ပို့တာ ဘယ်မှာအခွန်ရှိလို့လဲ။သူ့ယောကျာင်္း ထောင် ၁၀ နှစ် ကျသွားတယ် ပိုက်ဆံအတု ၁၀သ်ိန်း မိလို့ ၁၉၉၈ လောက်က ။အဲ့ဒါတကယ် ဖြစ်နေတာ ။နံမည်ပြောပြချင်တယ် မကောင်းတတ်လို့ တောင်ကြီးဈေးထဲမှာ သွားစုံစမ်းလို့ရတယ်။နံမည်ကြီးတွေ ။သူ့ယောကျာင်္းက K …L….
စကား မစပ် ထွေရာလေးပါးထဲ … နည်းနည်းဝင်တို့ လိုက်ဦးမယ် ….. ။
သစ်လုံးတင်ကြားကြီးတွေလေ … လူမြင်ကွင်းအချိန်တွေဆို ချောင်းဝနားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘူတာရုံလမ်းနားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းဘေးထိုးရပ်ထားကြတယ် … လူတွေအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ .. ညကိုးနာရီ ၊ ကိုးနာရီခွဲလောက်မှ ဟိုဟိုဒီဒီထမောင်းတာ ဘာဖြစ်လို့ ပါလိမ့် … ?
အရက်သောက်ပြီးအရှိန်နဲ့ မောင်းနှင်နေတဲ့ ပေနှစ်ဆယ် ကွန်တင်နာတွေ ၊ ပေလေးဆယ် ကွန်တင်နာတွေ ညဘက်မှာ ကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက် ဆက်တိုက်တောင်မြောက်ရွေ့ရှားနေတာ .. ဘာလုပ်နေကြပါလိမ့် .. အဟဲ …. အိုတီဆင်းပြီး အလုပ်လုပ်ကြတယ်ထင်တယ်… ။
သို့သော်လည်း … လားရာလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရတာ … ဆိပ်ကမ်းဘက်ကို ဦးတည်နေသလိုပဲ … ဆိပ်ကမ်းဘက်ကို ဦးတည်ရအောင်လဲ .. ညဘက် ဘယ်ကာစတန်က .. ဒီလောက် အနောက်ကျခံပြီး cargo သွင်းလို့ရပါလိမ့် …. ။
ဓါတ်တိုင်မီးတွေလည်း …. အမြင့်ကြီးမှာ တပ်ထားပေမယ့် .. ခဏခဏ မီးလုံးမရှိတော့တာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် …. ။
ပြောရလျှင် .. အောင်မင်းလွန်ရာကျတော့မယ် ….. မြင်တော့မြင်နေတယ် … မပြောဖြစ်သေးတာတွေ အများကြီး… တောက်ကျင့်မကောင်းပဲ ကလိမ်ကျနေတဲ့ လုပ်ရက်တွေအများကြီး …. ။
အဲ့ဒါ Asia world ဆိပ်ကမ်းကိုသွားတာ နေမှာ ။တကယ်တော့ Asia world က ၀အမည်ခံ တရုတ်အစစ်တွေ လေ ။မြန်မာပြည်ထဲ လမ်းမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ Asia world က ရှမ်းပြည်ဘက်မှာ လမ်းတွေ အကြီးအကျယ် ဖောက်လိုက်တာ သိတဲ့သူတွေ သိကြတယ်။ တရုတ်တွေ အ၀င်လမ်းကို ဖြောင့်လို့ ။ko wai phyoe ပြော သလို နိုင်ငံခြားက လာရင်းနှီးမြုပ်နှံ တာ မြန်မာနိင်ငံသား ၅သိန်းလောက် အလုပ်ရတာ ၀မ်းသာစရာပါ။ဒါပေမဲ့ ဖိလစ်ပိုင်လို မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေက အကွက်စေ့ပါတယ်။ဒေါရစ်မစ်ချယ်လို လူကို သံအမတ်ခန့်လိုက်တာ နဲ့သူတို့ဘယ်လောက်ဦးဏှောက်သွားသလဲဆိုတာ လိုက်မမှီပါဘူးဗျာ။
မြန်မာတွေ လည်တာ တရုတ်တွေ အိပ်နေသလောက်ပါ။Asia world ဆိပ်ကမ်းက တရုတ်တင်တယ်ဆို တာ တရုတ်က သိပြီးသား အခွန် ဘယ်ပြောသလောက်ကောက်ပါ့မလဲ။ခိုးတင်လာတာလေ ။ဒါကြောင့်ဟိုတော်တော်ကြာ က အဲ့ဒီ ဆိပ်ကမ်းမှာ ကျွန်းပုံကြီး မီးလောင်နေတာ ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒါ အကြောင်းရှိတယ်လေ။
အစိုးရအလုပ်ထဲမှာမှ လ၀ကနဲ့ ကာစတမ်ဘက်ကို အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေများတယ် ကိုစိမ်းကျော်ရေ ။
ိကျုပ် ၀က်တွင်ဖြစ်တတ်သော နားရွက်ပြာရောဂါနင့် နွားတွင်ဖြစ်တတ်တော ခွာနာလျှာနာ တို့ကို မှားယွင်းစွာ ဖြစ်ရေးမိပါကြောင်း။